Ptasia Osada Dom Kwokacz 6-8 abantu
Gardna Wielka, pomorskie, Poland
Uvuka kusasa kumandlalo opholileyo, ufumanisa ngolonwabo inzolo eyoyikekayo. Akukho nto inyukayo, akukho nto inqabileyo. Isiqabu! Kwaye usezilalini.Ukwilali yeeNtaka, kwindlwana yaseKwokacz! Sinendlu etofotofo esinayo, kukho umntu osikhathaleleyo kwaye wacinga ngazo zonke iinkcukacha ngentuthuzelo yakho engqondweni. Utya ekhitshini elijonge echibini okanye kwi-terrace. Nayiphi na imozulu idala amathuba amatsha. Ulwandle lweBaltic lwabaNgaphakathi luvulekele wena, yiza nje !!!! .........
Amakhaya ethu enziwe ngezinto ezishiyiweyo, sizama ukubanika ukukhanya okutsha kunye nentsingiselo ...
Iikhilomitha ezili-12 ukuya kuLwandle lweBaltic, ungafika kwindawo yokupaka iimoto malunga neekhilomitha ezisi-8 ngemoto kwaye kufuneka uhambe malunga neekhilomitha ezi-3.5 ngeenyawo, kuba ngummandla wePaki yeSizwe yaseSłowiński, eqinisekisa iilwandle zasendle okanye, ngenye indlela. , malunga nemizuzu engama-30 ngebhayisekile.
Od początku działalności przywiązujemy ogromną wagę do jakości świadczonych usług, dbając o doskonały , zdrowy ekologiczny stan ducha naszych gości . Jednocześnie, aby zaspokoić po…
Ndingumhlali waseGardna Wielka iminyaka eyi-10. Bendingalindelanga ukuba ilali inganditsalela kwizinto ezingaka !!! Usuku ngalunye lwaluzele yimiceli mngeni emitsha kunye nezinto ezothusayo. Indalo yasendle enomtsalane, egadwe yiSłowiński National Park, ikhusela eyona nto intle, indenze ndazibhaqa ngakumbi ndayithanda le ndawo. "Ukuhlaliswa kweentaka" ngundoqo wamava am, endifuna ukuwadlulisela kwiindwendwe zam kunye nabakhenkethi abavela ngaphandle. Bonisa iimfihlelo ezininzi kunye nobutyebi bale mimandla ngokusemandleni. "Masikhawuleze ukubazi, bahamba njalo ngokukhawuleza ......."
Ndingumhlali waseGardna Wielka iminyaka eyi-10. Bendingalindelanga ukuba ilali inganditsalela kwizinto ezingaka !!! Usuku ngalunye lwaluzele yimiceli mngeni emitsha kunye nezinto e…